‘उपाध्यक्ष ज्ञान बहादुर तामाङको नेतृत्वमा प्यानल घोषणा गर्छौं’ | सहकारी सञ्चार
२०७६ पुष १३
‘उपाध्यक्ष ज्ञान बहादुर तामाङको नेतृत्वमा प्यानल घोषणा गर्छौं’
टेक प्रसाद चौलागाईं
साधारण सभाको तयारी कहाँ पुग्यो ?
– संघको पुस १८ गते बीसौं वार्षिक साधारण सभा हुँदै छ । साधारण सभाले संघको कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसका लागि निर्वाचन उपसमितिले मतदाता नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ । संघको निर्वाचनमा १ हजार ९ सय २३ जना प्रतिनिधिहरुले मतदान गर्दै हुनुहुन्छ । मतदान गर्नका लागि प्रतिनिधि कार्ड आवश्यक पर्छ । अहिले साथीहरुले संघबाट धमाधम कार्ड लगिरहनुभएको छ । संचालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिले साधारण सभामा प्रस्तुत गर्ने वार्षिक प्रतिवेदन छाप्ने काम पनि भईरहेको छ ।
तपाईं पुनः अध्यक्ष बन्ने विचारमा हुनुहुन्छ कि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा ?
– मैले संघमा पाँच वर्ष अध्यक्ष भएर काम गरेँ । यसअघि पाँच वर्ष संचालक थिएँ । यसरी दश वर्ष मैले जिल्ला संघमा काम गरेँ । अहिले संघका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा नयाँ टिम बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो । यही अनुरुप हामीबीच एकखालको सहमति पनि भईसकेको छ । म नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै छु । संघका उपाध्यक्ष ज्ञान बहादुर तामाङको नेतृत्वमा सर्वसम्मत नयाँ समिति बनाउने मेरो प्रयास जारी छ ।
तपाईंले सर्वसम्मत समिति बनाउने कुरा गर्नुभयो । तर एउटा पक्षले अध्यक्षका उम्मेदवार सार्वजनिक गरिसक्यो । सबैलाई मिलाउनका लागि तपाईंले कस्तो भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ ?
– मैले तपाईंहरुको समाचार हेरेँ । एकजना साथीले अध्यक्षको नाम टुङ्गियो, अर्को बैठकबाट टिम बनाउँछौं भन्नुभएको रहेछ । सहकारी सबैको साझा मञ्च हो । हामी हिजो पनि सहमतिको पक्षमा थियौं र आजपनि त्यही पक्षमा छौं । सहकारीमा संकट आउँदा कुनै एउटा पार्टीलाई मात्र आउँदैन । राज्यले कडा कानुन ल्याउँदा एउटा पार्टीलाई मात्र अप्ठ्यारो पर्दैन, सिंगो अभियानलाई असर पर्छ । सबै सहकारीकर्मीहरुलाई असर पर्छ । अहिले जिल्ला संघको समितिमा भएका सबै साथीहरु पनि सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । हामी अहिलेपनि सहमति र सहकार्यकै पक्षमा छौं । हामी उपाध्यक्षको नेतृत्वमा सहमति गरेर अगाडि जान खोजीरहेका छौं । अर्कोपक्ष छुट्टै टिम बनाएर आउँछ भने हामी पुस १५ गते ज्ञान बहादुर तामाङको अध्यक्षतामा प्यानल घोषणा गर्छौं ।
तपाईं राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा संचालक बन्ने अभियानमा हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा छ । वास्तविकता के हो ?
– महासंघको पनि २४ र २५ गते निर्वाचन सहितको साधारण सभा छ । महासंघमा जान मेरो योग्यता अपुग भएजस्तो लाग्दैन । निर्वाचन हुनु अघि यसो भन्नु उचित हुँदैन होला, तरपनि संचालकमा मेरो उम्मेदवारी मात्र होईन म महासंघको संचालक हुन्छु भन्नेमा विश्वस्त छु ।
‘आडम्बरी कुरा नगरी पार्टीको सहजीकरणलाई स्वीकार गरौं’